> Resource> Draịvụ> Draịvụ Ga-buut (Windows 7, XP ma ọ bụ Vista)
My ike mbanye agaghị buut!
My kọmputa na-arụ ọrụ nke ọma n'abalị ikpeazụ. Ma mgbe m rutere n'ụlọ taa ya wont ibu na m eche na e nwere ihe na draịvụ ike. M na-agbalị ibidogharịa ma, ọ bụghị na-arụ ọrụ. M gbalịrị ịlele ahụ cables na e ọma enịm. Ihe na-Rong na kọmputa m? Echiche ọ bụla?
Ọ bụrụ na ndị ike mbanye na kọmputa gị agaghị buut, mgbe ụfọdụ, ọ ga-ugboelu na a nwa ihuenyo, ma ọ bụ na ị bụghị ike na-esi na Windows loading mmanya, na i nwere ike na-edebe a nwa ihuenyo na ịfegharị cursor ma ọ bụ njehie ozi dị ka ike mbanye buut ọdịda. Mgbe nke a emee na ị na-adịghị mkpa data na ya, ị nwere ike ịhọrọ reinstall gị usoro, n'ihi na nke a ụdị nsogbu n'ozuzu mere site ụfọdụ Windows njehie. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-gị data, ị nwekwara ike chọta a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na-esi gị ike mbanye malitere na buut odida ofu.
Ọ bụrụ na ị bu n'obi na-nke abụọ ụzọ, a nnapụta CD / USB dị mkpa tupu ịmalite ihe ọ bụla. Wondershare LiveBoot buut CD / USB bụ m nkwanye. ọ pụrụ inyere gị ka buut gị na kọmputa site na draịvụ ike ọma n'okpuru ọ bụla unbootable ọnọdụ, na-enyere gị aka idozi buut odida nsogbu.
Nzọụkwụ buut gị na laptọọpụ na-agaghị malite
Mgbe ịzụta a software, ị ga-enweta a download njikọ na a akwụkwọ ikike site n'aka Wondershare. Download na wụnye omume na a na-arụ ọrụ na kọmputa, na mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịgbaso 3 nzọụkwụ dị ka e gosiri n'okpuru.
Step1. Mepụta a bootable CD / USB mbanye
Get a ide USB ma ọ bụ CD mbanye na fanye ya n'ime kọmputa ebe ị na-na na wụnye ihe omume. Na-agba ọsọ usoro ihe omume ị ga-enweta a ọkachamara dị ka ndị na. Ebe i nwere ike họrọ "Olee otú ike LiveBoot bootable CD" ma ọ bụ "Olee otú ike LiveBoot bootable USB mbanye" ike gị bootable disk. Ma nke ha na-arụ ọrụ na na-ewe gị otu nzọụkwụ. Pịa green ọkụ button na i nwere ike ime ka gị na bootable disk na sekọnd ole na ole.
Step2. Malite na kọmputa gị site na bootable CD / USB
Mgbe eke gị bootable disk, were ya si na-atụgharị gị na kọmputa na-apụghị buut gị ike mbanye, na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe ị nụrụ mkpọtụ nke usoro loading, pịa F12 ozugbo. Na mgbe ahụ ị nwere ike ịga n'ime buut Ngwaọrụ NchNhr. Họrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive" n'okpuru ya na ị ga-esi a menu dị ka ndị na. Họrọ "buut si LiveBoot" iji nweta gị na kọmputa.
Step3. Idozi "ike mbanye agaghị buut"
Mgbe nkeji ole na ole, ị ga-esi n'ime kọmputa gị. Ọzọ, ihe ị chọrọ ime na-gwara na "ike mbanye gaghị amalite elu" nke. Mgbe Wondershare LiveBoot-egosi, gaa na "Windows Iweghachite", na-ahọrọ "buut Crash Ngwọta" ebe ị pụrụ ịchọta ihe ngwọta na diski ike buut ọdịda. Jiri ịba uru gosiri n'okpuru na-esi gị nke ofu.
Mgbe nsogbu ofu, wepụ nke LiveBoot CD / USB mbanye, na Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa ka nkịtị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na i nwere ike buut gị na laptọọpụ elu ọma.
Chefuru Outlook Password: ụzọ dị mfe iji weghachite ya
XP Ga-buut? Gbalịa Nke a Way
Ihe unu kwesịrị ime iji a ike mbanye okuku?
Gịnị na-eme mgbe ị na-ata ahụhụ a ike mbanye ọdịda
Kasịnụ ndu dochie gị ike mbanye
All Draịvụ Iweghachite Ngwaọrụ mkpa ka ị mara
ike mbanye mgbake San Diego
Nyefee Music si mpụga ike mbanye ka iPod
Olee otú Naghachi Lost faịlụ site Hitachi Ike diski